Ahoana ny fampitomboana ny fiainanao amin'ny vavaka 2020 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Ahoana ny fampitomboana ny fiainanao amin'ny vavaka 2020
Ahoana ny fampitomboana ny fiainanao amin'ny vavaka 2020
Tsy vaovao intsony fa efa miverina eto ny taom-baovao. Ny valandrasana miandry indrindra amin'ny taona 2020 dia eto farany. Na dia nanomboka aza ny taona, na izany aza, tsy ela loatra dia tsy mahatsapa fiovana.
Matetika aho no maheno olona mitaraina momba ny tsy afaka hivavaka. Ary rehefa manao izany dia tsy mijanona ela eo amin'ny toerana fivavahana izy ireo. Raha ny marina dia ny fotoam-bavaka dia natao ho azy ireo ho fanafody fatoriana tsara indrindra. Rehefa tena te hivavaka izy ireo fa ho tonga ny torimaso, dia ny vavaka no asa manelingelina.
Taom-baovao izao ary mbola aloha vao mahazo fanampiana. Ny fanontaniana lehibe dia ny fomba hanatsarako ny fiainam-bavaka amin'ny 2020. Tsy manahy intsony aho, amin'ny lahatsorany dia nandinika tamim-pahatsorana ny zavatra manan-danja tokony hatao aho amin'ny taom-baovao.
1. mangetaheta sy hanoanana hahalala an'Andriamanitra bebe kokoa
Mampihomehy raha ny fahitana azy, maro ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra. Raha misy mahalala azy kely, ny sasany kosa tsy mahalala azy akory. Mino fotsiny izy ireo fa Andriamanitra dia mahay mamaha ny olan'izy ireo. Na izany aza, tsy mahalala na inona na inona momba ny lalàn'Andriamanitra na ny fomba fiasan'Andriamanitra izy ireo.
Ny soratra ao amin'ny bokin'i Daniela 11 hatramin'ny 32, Ary izay manao ratsy amin'ny fanekena dia haringany amin'ny fandokafana; fa ny olona izay mahalala an'Andriamaniny kosa dia hahery ka manararaotra. Ao amin'ity andininy ity, ny soratra masina dia mahatonga antsika hahatakatra fa ireo izay mahalala an'Andriamaniny dia ho matanjaka. Ny tsy nahajanona ela teo amin'ny toerana fivavahana dia ny tetiky ny devoly hanakorontana ny ain'ny olona. Ary ny devoly dia hivoatra ihany rehefa tsy matanjaka ny olona toa azy, lasa matanjaka ianao rehefa fantatrao ilay Andriamanitra ivavahanao. Ny fahafantarana an 'Andriamanitra izay tompoinao dia mahatonga anao hatoky sy tia an' Andriamanitra bebe kokoa.
Rehefa tena tia an'Andriamanitra bebe kokoa ianao dia te hijanona eo anatrehany foana, dia ho azonao ny fitenin'ireo Andriamanitra nefa eo amin'ny toerana ivavahana ianao. Izany dia hitondra anao hatrany amin'ny fahatsapan-tena fa ny devoly milalao kilalao hendry eo aminao amin'ny fotoana hahatsapanao fa matory, reraka na sasatra amin'ny toeran'ny vavaka.
Voafitaka tamin'ireo olona nanontany aho raha tena mamaly vavaka Andriamanitra
Mamaly vavaka ve Andriamanitra?
Eny, mamaly ny vavaka Andriamanitra, raha misy lehilahy hivavaka, dia misy foana Andriamanitra izay mamaly ny vavaka. Izany no antony maha zava-dehibe ny mahafantatra sy mangetaheta an'Andriamanitra bebe kokoa amin'ity taom-baovao ity. Ireo andininy ao amin'ny Baiboly dia tsy fanalam-baraka fotsiny, tena tantara ary firaketana ireo zavatra nitranga tamin'ny lasa.
2. Miaraha mivavaka amin'ny olona iray / vondrona
Fomba iray hafa hampitomboana ny fiainanao am-bavaka amin'ity taona 2020 ity dia ny mianatra miaraka amin'ny olona iray. Tadidio ianao, rehefa misafidy hoe iza no hivavaka hivavaka, dia ho azonao antoka fa matanjaka sy be vavaka kokoa noho ianao ny olona toy izany. Manandratra ny tenantsika eo amin'ny toerana fivavahana isika. Rehefa misy olona mandinika antsika eo amin'ny fitoeran'ny vavaka, dia mirona kokoa isika. Ohatra tena tsara izany i Jesôsy, rehefa niteny tamin'ny mpianany Izy hivavaka dia lasa nivavaka irery i Kristy. Na izany aza, rehefa niverina izy dia nihaona tamin'ny mpianany efa natory efa nomeny, dia nomeny azy ireo hivavaka indray.
Raha tsy manana antom-bavaka amin'ny taona 2019 ianao dia tsara kokoa ianao manomboka ny mikasa ny hanana iray ho haingana.
Ahoana no ahadinoako ny fanontaniana nanontanian'ny olona ahy indray mandeha. Nihomehezako ilay fanontaniana nefa fantatro fa fanontaniana goavana izany nanelingelina ny sain'ny olona nanontany.
Moa ve manao fahagagana Andriamanitra mandritra ny Vavaka?
Andriamanitsika dia Andriamanitra mpanao fahagagana. Raha tsy nila famonjena dia tsy ilaina ny fahafatesan'i Kristy. Raha afaka manao fahagagana samirery ny olombelona mety maty, dia tsy misy ilana ilay mihoatra ny natiora. Raha sary tsotra noforonin'olombelona no mahavita zava-mahatalanjona, tsy mainka va ny Mpamorona ny lanitra sy ny tany? Ilay Andriamanitra taloha, Izay eo, ary Ilay ho avy. Ilay Izaho dia IZAHO, Ilay Masin'ny Isiraely, Izy dia manao fahagagana mihoatra ny takatry ny sain'ny olombelona.
Ny hery izay nampisaraka ny ranomasina dia mihoatra ny ara-batana, izany dia iray amin'ireo fahagagana vitsivitsy izay voarakitra ao amin'ny soratra masina. Tahaka izany koa, amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao dia nahita maso Andriamanitra nanao fahagagana tsy takatry ny sain'olombelona. Izahay dia nahita olona voamarika olona maty, na dia ireo manam-pahaizana ara-pitsaboana aza, na izany aza, ny fotoam-bavaka mahery vaika dia nanafaka ny olona tsy ho faty. Noho izany, manana fitaovam-piadiana ampy izahay, sombin-porofo sy zava-niainana izay manao fahagagana Andriamanitra.
3. Mivavaha ao amin'ny Fanahy Masina
Ny iray amin ’ireo fomba azo antoka indrindra hijanonana eo amin’ ny toeran ’ny vavaka dia ny mivavaka amin’ ny matoatoa. Rehefa mivavaka amin'ny fiteny azontsika isika dia ho tonga amin'ny fotoana tsy ho fohy na hilazana ny teny. Tsy mahagaga, hoy ny andinin-teny milaza fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia manatsara ny tenany. Na izany aza, ny fivavaka amin'ny fanahy masina dia manampy antsika hijanona ela eo amin'ny toerana ivavahana.
Ahoana no fomba hiresahako amin'ny Fanahy Masina?
Nanoratra lahatsoratra feno momba ny Fanahy Masina aho, kitiho eto hamakiana azy. Matetika ny olona no nanontany ahy an'io pasitera io, ahoana no fomba hiresahako amin'ny Fanahy Masina. Misy olona mila mampianatra ahy ny fomba fiteniny ve?
Tsia sy tsia. Tsy misy olona tokony hampianatra anao ny fomba hiresahana ao amin'ny Fanahy Masina. Ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny 1 Korintiana14: 4-18.Paulin'ny Apôstôly dia miresaka betsaka momba ny Vavaka amin'ny fiteny. Ary ao amin'ny Asan’ny Apostoly 2: 4, dia nohazavain'ny Baiboly fa feno ny Fanahy Masina izy rehetra ary nanomboka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra satria nomen'ny Fanahy azy ireo. Ny tapany dia nilaza ary niresaka izy ireo raha nanambara ny fanahy. Ny fanahy masina no manome fanambarana hiteny ao amin'ny Fanahy Masina.
Ny fanahy masina dia fanomezana ho an'ny mino rehetra avy amin'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina: Ary amin'ny farany, haidiko amin'ny nofo rehetra ny fanahiko, haminany ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ny olon-vavolinao hanonofy ary ny zatovolahy hahita fahitana. Nampanantena Andriamanitra fa handatsaka ny Fanahiny ao amintsika. Ka rehefa mpino ianao dia ny hany mila ataonao dia ny mivavaka amin-kitsimpo amin'Andriamanitra mba hampihatra ny lelanao amin'ny fiteny hafa.
Ho tanjon'ny fanamafisana, ny fampitomboana ny fiainanao am-bavaka amin'ity taona 2020 ity, manatanteraka zavatra 3 fotsiny
1. Mangetaheta sy noana hahafantatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra
2. Mivavaha amin'ny olona iray, tsara kokoa ny vondrona mpivavaka na mpiara-miasa
Previous lahatsoratraVavaky ny fanantenana
Next lahatsoratraNy fivavaha manohitra ny fifandraisana amin'ny razana
Gloria 17 Janoary 2020 Tamin'ny 8:58 maraina
aingam-panahy aho hivavaka bebe kokoa amin'ity taona ity noho ny fanampian'ny fanahy masina. Misaotra lehilahin'Andriamanitra
30 Vavaka Hanao Fahagagana avy hatrany ho fanasitranana
Vavaky ny ady ary didim-pitsarana